KBS2 – Networks – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Uncontrollably Fond (2016) Complete Unicode Shin Joon Young(Kim Woo Bin) ကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်ထိပ်ကြဲအောင်မြင်နေတဲ့အနုပညာကြည်ပွင့်ပါ။ ဒါပေမယ့်လဲ သူ့မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာရယ်လို့မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့မှာ သေလုမျောပါးရောဂါဝေဒနာတစ်ခုခံစားနေရလို့ပါ။ Shin Joon Young(Kim Woo Bin) ကတော့ တစောက်ကမ်းလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သူတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ အထက်တန်းလောက်ကတည်းကရင်းနှီးခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းတွေလဲ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့သူကတော့ No Eul( Suzy) ပဲဖစ်ပါတယ်။ No Eul( Suzy) ကတော့ မဟုတ်မခံပြန်ပြောတတ်ပြီး ဖျက်လတ်သွက်လတ်တဲ့ PD တစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ Shin Joon Young နဲ့ No Eul တို့နှစ်ဦးက ၅ နှစ်နီးပါး အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးမှ နောက်ဆုံး Documentry တစ်ခုရိုက်ရင်းနဲ့မှ ပြန်ဆုံကြတဲ့အခါ... နှစ်ယောက်သား ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပြန်ရသွားနိုင်မလား? Shin Joon Young ကရော ရောဂါကြီးကိုတွန်းလှန်နိုင်ပြီး အသက်ရှင်သွားမှာလားဆိုတာကိုတော့ ...
Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016) Complete Unicode ရှီလာပြည်မှ ပန်းထက်လှသော အမျိုးသားများနှင့် သမိုင်းမွေ ထီးနန်းရတနာ Hwarang ဇာတ်လမ်းတွဲ ကိုရီးယားဒရမ်မာဇာတ်လမ်းများရဲ့ ရိုက်ကူးမှုအတိုင်း ရိုက်ကူးပြီး သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ထုတ်လွှင့်ပြသတာမဟုတ်ဘဲ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလုံးကို ရိုက်ကူးပြီးမှ ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့သမိုင်းနောက်ခံ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာမက တရုတ်နိုင်ငံမှာပါ ထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ကနေ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်အထိ အပတ်စဉ် တနင်္လာနှင့် အင်္ဂါည ၁၀ နာရီအချိန်တိုင်း KBS2 ရုပ်သံလိုင်းကနေ အပိုင်း ၂၀ တိတိ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် ပတ်ဆောဂျွန်း၊ ယောင်းရှစ်၊ SHINee အဖွဲ့ဝင် ချွဲမင်ဟို၊ BTS အဖွဲ့ဝင်ကင်ထယ်ယောင်းနဲ့ ဂိုအာရာ တို့ ပါဝင်ထားပါတယ်။ ကိုရီးယားရှေးခေတ် ရှီလာနိုင်ငံတော်ရဲ့ မြို့တော် ဆော်ရာဘိုမှ ချစ်ခင်နှစ်သက် ဆွတ်ပျံ့ဖွယ် အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို နန်းတွင်းရေးရာများနဲ့ ယှက်နွယ်ကာ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅ဝ၀ ခန့်တုန်းက ရှီလာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ...
Zombie Detective (2020) Complete Unicode ဇွန်ဘီ ကား တွေကိုမှ ကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ဇွန်ဘီတစ်ကောင်က စုံထောက်ဖြစ်လာချိန်မှာ ဟာသတွေနဲ့အတူ ကြည့်ရမဲ့ ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းက Kim Moo Young(Choi Jin Hyuk) က ဇွန်ဘီတစ်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။၂နှစ်ကြာပြီး သူ့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေက ပျောက်ဆုံးလာတဲ့ နောက် ပုံမှန်လူတစ်ယောက်လို မရ ရအောင်နေထိုင်ရင်း အလွတ်တန်း သီးသန့် စုံထောက်ဖြစ်လာခဲ့သူပါ။ကံမကောင်းချင်တော့ သူ ဇွန်ဘီမဖြစ်သွားခင်က အတိတ်က အကြောင်းတွေကို မမှတ်မိတော့လို့ လူသားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်နေဖို့ အတိတ်က အကြောင်းတွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေနေသူပေါ့။ Gong Seon Ji(Park Ju Hyun)က အမှုတွေတရားမျှတဖို့အတွက် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးတဲ့စာနယ်ဇင်းမှာ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ပါ။အမှုတစ်ခုကို စုံစမ်းနေရင်း အမှုရဲ့သက်သေတစ်ဦးက ထူးဆန်းစွာပဲ အမည်တပ်လို့မရတဲ့ တစ်ဦးရဲ့ တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့နောက် အလုပ်ထွက်ပြီး အလွတ်တမ်းစုံထောက်လုပ်တဲ့ ရုံးမှာ အချိန်ပိုင်း လုပ်ရင်း ဇွန်ဘီ Kim Moo Youngနဲ့ တွေ့ဖို့ဖြစ်လာတဲ့နောက် ဟာသတွေနဲ့ ...
Into The Ring (2020) Complete Unicode Into the Ring သည်အစိုးရ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်သည့် Nana(Goo Se Ra) နဲ့ Handsome Young Man ဆိုပြီး ဆုရထားတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်း Park Sung Hoon တို့ကြားက လာဘ်စားမှုတွေကို တူတူဖော်ထုတ်ကြမဲ့ ကားပါ။ Nana က ပြသာနာတစ်ခုကို ကြားဝင် ဖျဉ်ဖြေတဲ့ကိစ္စတွေ ၊ ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်တာတွေ နဲ့ အသေးအဖွဲ့လေးတွေက အစ ဖြေရှင်းပေးရတာ ကို နှစ်သက်တဲ့ ခရိုင်ရုံး က အစိုးရ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးပါ။ဒါပေမဲ့ Nana က လစာကတော့ ထင်သလောက် မကောင်းတဲ့ထဲကပါ။ ဒါ့အပြင် “Queen of Civil Complaints” (မြို့ပြရဲ့ တိုင်ကြားမှု ဘုရင်မ) လို့ နာမည်ကြီးသူပါ။ Seo Gong Myung (Park Sung Hoon) ...
Woman of 9.9 Billion (2019) Unicode Kim Kang Woo ဆိုတဲ့အမျိုးသားကတော့ စုံထောက်ဟောင်းဖြစ်ပေမယ့် အမှုတစ်ခုကိုအသည်းအသန်လိုက်နေပါတယ်... ဒီအမှုက ထင်သလောက်မလွယ်ပေမယ့် သူလက်မလျှော့ဘူး.. ညီဖြစ်တဲ့သေဆုံးတယ်...သေဆုံးမှုမှာ ပတ်သက်တဲ့အရာတွေက ထိပ်သီးလူဆိုးဂိုဏ်းတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိထားတယ်.. .Cho Yeo Jung ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ သာမန်အမျိုးသမီးတွေလိုပဲ သာယာတဲ့ မိသားစုလေးပိုင်ဆိုင်ပြီး ဘဝကိုရိုးစင်းစွာဖြတ်သန်းချင်သူပါ... အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ တခြားမိသားစုအကြောင်းအရာတွေမှာ သူမ အတွက် ကံမကောင်းခြင်းတွေပဲယူဆောင်လာသလိုပါပဲ...ဘယ်အရာမှအဆင်မပြေ.... တစ်နေ့တော့ သူမအတွက် ကံဆိုးခြင်းလား ကံကောင်းခြင်းလား မသိ... ဒေါ်လာ ၉ သန်းကျော် ပါဝင်တဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ကောက်ရခဲ့တယ်... ဒီပိုက်ဆံအိပ်ဟာ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေနဲ့ အဓိကပတ်သက်နေပြီး သူမအတွက် တကယ့်ကိုသွေးပျက်ဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်... စုံထောက်နဲ့ သူမ ဘယ်လိုတွေဆုံကြမလဲ.. ဒီအရှုတ်တွေကို ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ.... ဒီစီးရီးက cast တွေလည်း နာမည်ကြီးတွေဖြစ်သလို ဇာတ်လမ်းကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်... လှည့်ကွက်တွေ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေနဲ့တကယ့်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပါပဲ.... Credit Review Zawgyi Kim Kang Woo ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသားကေတာ့ စုံေထာက္ေဟာင္းျဖစ္ေပမယ့္ အမႈတစ္ခုကိုအသည္းအသန္လိုက္ေနပါတယ္... ဒီအမႈက ထင္သေလာက္မလြယ္ေပမယ့္ သူလက္မေလွ်ာ့ဘူး.. ညီျဖစ္တဲ့ေသဆုံးတယ္...ေသဆုံးမႈမွာ ပတ္သက္တဲ့အရာေတြက ထိပ္သီးလူဆိုးဂိုဏ္းေတြျဖစ္ေနႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုသူသိထားတယ္.. .Cho Yeo Jung ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ သာမန္အမ်ိဳးသမီးေတြလိုပဲ သာယာတဲ့ မိသားစုေလးပိုင္ဆိုင္ၿပီး ဘဝကို႐ိုးစင္းစြာျဖတ္သန္းခ်င္သူပါ... အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ တျခားမိသားစုအေၾကာင္းအရာေတြမွာ သူမ အတြက္ ကံမေကာင္းျခင္းေတြပဲယူေဆာင္လာသလိုပါပဲ...ဘယ္အရာမွအဆင္မေျပ.... တစ္ေန႔ေတာ့ သူမအတြက္ ကံဆိုးျခင္းလား ကံေကာင္းျခင္းလား မသိ... ေဒၚလာ ...
Gunman in Joseon (2014) Complete Unicode K လို့လူသိများတဲ့ Lee Joon-Gi ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ကိုရီးယားနန်းတွင်းဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သေနတ်တွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာပီး လုပ်ကြံသူတွေအသုံးပြုကျတဲ့အကြောင်း နန်းတွင်းအရူပ်တော်ပုံကနေ သစ္စာရှိတဲ့အမတ်က နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မူ့တွေဖြစ်ကုန်တဲ့ မရိုးသားတဲ့အမတ်တွေအကြောင်းအပြင် ဂျိဆွန်းခေတ် ကိုရီးယားအခြေအနေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဂျပန်တွေရဲ့ ခေတ်မှီလက်နက်တွေ သေနတ်တွေကိုတွေ့ရပီး အထူးကြည့်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ် Zawgyi K လို႔လူသိမ်ားတဲ့ Lee Joon-Gi ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ထားတဲ့ ကိုရီးယားနန္းတြင္းဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္ေတြစတင္ေပၚေပါက္လာပီး လုပ္ႀကံသူေတြအသုံးျပဳက်တဲ့အေၾကာင္း နန္းတြင္းအ႐ူပ္ေတာ္ပုံကေန သစၥာရွိတဲ့အမတ္က ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မူ႔ေတြျဖစ္ကုန္တဲ့ မ႐ိုးသားတဲ့အမတ္ေတြအေၾကာင္းအျပင္ ဂ်ိဆြန္းေခတ္ ကိုရီးယားအေျခအေနကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ ေခတ္မွီလက္နက္ေတြ ေသနတ္ေတြကိုေတြ႕ရပီး အထူးၾကည့္ေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲျဖစ္ပါတယ္ Quality - HDTV 720p Episode 1 MEGANZ, YuuDrive , Storage M-Sub , SharePw Episode2MEGANZ, YuuDrive , Storage M-Sub , SharePw Episode3MEGANZ, YuuDrive , Storage ...
The Tale of Nokdu (2019) အစအဆုံး Complete Unicode Tale of Nok Du ဟာ webcomic ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထာူတာပဲဖြစ်ပါတယ် September 30, 2019 ကစပြီး တနင်္လာ အင်္ဂါ နှစ်ရက် အပတ်စဉ် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Jeon Nok-Du ကတော့ သူ့သားစုက သူ့ကို မိန်းကလေး ငယ်ငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ပေးထားတာကို သူကဘသဘောမကျပါဘူး …. သူ့အနေနဲ့ တကယ်ချစ်တဲ့သူကိုပဲလက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိသလို လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ငယ်ရွယ်သေးတယ်လို့ ယူဆမိနေတယ်……. အဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုရှောင်ဖို့ မိန်းမချောလေးJeon Nok-Du ဟာ အိမ်က ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ် …. မိန်းမသားဟန်ဆောင်ပြီး မုဆိုးမရွာမှာ သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ် အဲ့မှာ ကချေသည်ဖြစ်ဖို့လေ့ကျင့်နေတဲ့ Dong Dong-Ju (Kim So-Hyun) နဲ့တွေခဲ့ပါတယ်….. အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဘယ်လိုတွေအလွဲလွဲအချော ဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဦး….ဒီကားက တကယ်လည်းရယ်မောပျော်ရွှင်ရသလို လှပနုပျိုလွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်လေးတွေရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ရင်ခုန်ကြည်နူးဖွယ်ရာခံစားကြရမှာပါ… Credit Review Zawgyi Tale of Nok Du ဟာ webcomic ကို ျပန္လည္႐ိုက္ကူးထာူတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ...
Justice (2019) Complete Unicode Last Empressထဲက မင်းသား Choi Jin Hyuk နဲ့Kill itထဲက မင်းသမီးလေး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ရှေ့နေကားတွေကိုကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီး အကြိုက်တွေ့စေမှာပါဇာတ်လမ်းကတော့ Lee Tae Kyungက အောင်မြင်တဲ့ရှေ့နေတစ်ယောက်ပါ သူဟာ လူချမ်းသာတွေရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုပဲ လိုက်ပေးသူဖြစ်ပါတယ် သူ့ညီအတွက် လက်စားချေဖို့ရှေ့နေဖြစ်လာသူဖြစ်ပြီး ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းကိုသာ အာရုံစိုက်ပါတယ် လူချမ်းသာတွေရဲ့ကိစ္စကိုသာ အလေးပေးဆောင်ရွက်ပြီး သူ့ပါဝါကို ပိုမိုကြီးထွားလာအောင်လုပ်လေ့ရှိပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခု ငွေအလွဲသုံးစားအမှုမှာ သူပါဝင်ပတ်သတ်လာချိန်မှာတော့…ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ကြည့်ရူခံစားကြပါရှင် Zawgyi Last Empressထဲက မင္းသား Choi Jin Hyuk နဲ႔Kill itထဲက မင္းသမီးေလး ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ေရွ႕ေနကားေတြကိုၿကိဳက္တဲ့ပရိသတ္ႀကီး အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမွာပါဇာတ္လမ္းကေတာ့ Lee Tae Kyungက ေအာင္ျမင္တဲ့ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ပါ သူဟာ လူခ်မ္းသာေတြရဲ႕အမႈကိစၥေတြကိုပဲ လိုက္ေပးသူျဖစ္ပါတယ္ သူ႔ညီအတြက္ လက္စားေခ်ဖို႔ေရွ႕ေနျဖစ္လာသူျဖစ္ၿပီး ပိုက္ဆံတစ္ခုတည္းကိုသာ အာရုံစိုိက္ပါတယ္ လူခ်မ္းသာေတြရဲ႕ကိစၥကိုသာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး သူ႔ပါဝါကို ပိုမိုႀကီးထြားလာေအာင္လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု ေငြအလြဲသံုးစားအမႈမွာ သူပါဝင္ပတ္သတ္လာခ်ိန္မွာေတာ့…ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲ ၾကည့္ရူခံစားၾကပါရွင္ Quality - Next 1080p Episode Size - ...
Healer (2014) Complete Kim Moon -Ho (Yoo Ji Tae ) ႐ုပ္သံ ကုမၸဏီ တစ္ခုမွာေအာင္ျမင္ေနတဲ႕သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ သူက (Kim Moon Ho) အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးယူၾကည္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္ Chae Young Shin (Park Min Young) ကေတာ့ အင္တာနက္သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး Seo Jung Hoo (Ji Chan Wook) ကေတာ့ "Healer" ကေနတကယ့္သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတာပါ တစ္ေန႕မွာ Kim Moon Ho ကအတိတ္ကျဖစ္ခဲ႕တဲ႕ကိစၥတခုရဲ႕အမွန္တရားကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ႕ပါတယ္ အမွဳနဲ႕ပတ္သတ္တဲ႕သူေတြကိုေသခ်ာခ်ဥ္းကပ္ကူညီခဲ႕ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႕ သူတို႕သံုးေယာက္ဆံုမိၾကတဲ႕အခါမွာေတာ့ သူတို႔(၃) ဦးၾကားက Romance ေလးေတြနဲ႔အတူ အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ရပ္ေတြၾကား အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ျပသသြားမွာပါ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲကေတာ့လူငယ္ဇာတ္လမ္း ျဖစ္ၿပီး သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝကိုလည္းေတြ႕နိုင္မွာျဖစ္သလို သူတို႕ ဒီသတင္းေထာက္ဘဝနဲ႕ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ျကမလဲဆိုတာကိုလဲျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္ Credit Review Quality 720p File Size - 500 MB Episode 1 Google Drive ...
Oh My Venus (2015) အစအဆုံး Complete အညႊန္းမေရးခင္ ပါ၀င္ထားတဲ ့သူေတြကုိ ေျပာျပခ်င္တယ္။ဘာလုိ့ဆုိ ခင္ဗ်ားတုိ့ရဲ့အာဂ်ဴးရွီး(ေပါင္းတာမွန္ရဲ ့လား)ပါေနလို့ပဲ။ ပူပူေႏြးေႏြး သိပ္မျကာခင္က ပီးသြားတဲ့(အိမ္နီးနားခ်င္းခ်စ္သူ) ထဲက So Ji-su ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မင္းသမီးကေတာ့ My Girlfriend IsaNine-Tailed Fox နဲ့လူသိမ်ားတဲ့မင္းသမီး Shin Min-a ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ကေတာ့ Jung Gyu-woon နဲ့Yoo In-young တုိ ့ကလဲ အားျဖည့္ေပးထားပါေသးတယ္။အပိုင္းအေရအတြက္ (၁၆) ပုိင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အထူးမွာျကားခ်က္ - (ဒီဇာတ္လမ္းတြဲကုိ မျကည့္ခင္ မိမိမွာရွိတဲ့အသည္းတျခမ္း ၀၀ကစ္ကစ္ေလးေတြကို တန္ဖုိးထားျကပါ။) ဇာတ္လမ္းေလးက...... - ကန္ဂ်ဴိအြန္တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းတုန္းကေတာ့ ကြင္းေပါ့ဗ်ာ (အမယ္ ေက်ာင္းတုန္းကြင္းေလးကိုသတိေတာင္ရမိတယ္)။ ဒီလိုနဲ့ေက်ာင္းက အတန္းေဖာ္ေလးနဲ ့အီစီကလီလုပ္ရင္းျကုိက္သြားျကေလေရာေပါ့။ အယ္ အလုပ္လဲ၀င္ေရာ ဖက္တီးျဖစ္သြားပီး ဘဲဲဘဲလမ္းခြဲတဲ ့အထိျဖစ္သြားေရာ စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ ့အခ်ိန္ သူေဌးသား trainer ...
Doctor Prisoner (2019) Complete စစထြက္ခ်င္းမွာပဲလူေျပာမ်ားခဲ႕ျပီး My Drama list မွာ 8.4ထိရရွိထားတဲ႕ကားေလးနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ Cross(ဆန္႕က်င္ဘက္)လိုကားမ်ဴ ိးႀကိဳက္နွစ္သက္သူမ်ား လံုးဝလက္လႊတ္မခံသင့္တဲ႕ကားပါပဲလို ့ေျပာခ်င္ပါတယ္ မင္းသားအေနနဲ႕ကေတာ့ ကိုလူေခ်ာထဲက Nam Goong Minနဲ႕ တရားသူႀကီးမင္းထဲကမင္းသမီးေလး Nara တို႕ျဖစ္ပါတယ္ နာရီေဂ်း ဆိုတဲ႕ဆရာဝန္ဆိုရင္ ထယ္ဂန္းေဆးရုံက မသိတဲ႕သူ မရွိသေလာက္ပါပဲ ရုပ္ေခ်ာ သေဘာေကာင္း ဆင္းရဲသားပိုက္ဆံမတက္နိုင္သူေတြကိုလဲ ေမတၲာထား အိပ္စိုက္ ကုသေပးတဲ႕သေဘာျဖဴတဲ႕ဆရာဝန္ေလးပါ အေမအိုႀကီးအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္ကိုရွာေဖြေနရသူလဲျဖစ္ပါတယ္ ေဆးကုရမွာ အလြန္ေတာ္သူလဲျဖစ္ပါတယ္ တခ်က္ေလးစမ္းသပ္လိုက္တာနဲ႔ ဘာေရာဂါဆိုတာတန္းသိသူမို႕ ထယ္ဂန္းေဆးရုံရဲ႕ အေတာ္ဆံုး ဆရာဝန္ဆိုလဲမမွားပါဘူး >>> တစ္ေန႕ အထက္လူႀကီးအကူအညီနဲ႕ သူ႕အေမကို ထယ္ဂန္းေဆးရုံမွာ အလကားခြဲစိတ္ခြင့္ရခဲ႕ပါတယ္ သူ႕အတြက္ေတာ့ အေပ်ာ္ဆံုးေပါ့ အဲ႕ေန႕မွာပဲ သူနဲ႕ ခင္မင္တဲ႕ဆင္းရဲလင္မယားကို (ဇနီးသည္က ကိုယ္ဝန္သည္)ကို သူက သူ႕အိပ္စိုက္ျပီး ထယ္ဂန္းေဆးရုံမွာ သားဖြားဖို႕ေျပာလိုက္တယ္ေပ်ာ္ရႊင္ ေနတဲ႕ လင္မယားနွစ္ေယာက္ ေပ်ာ္လို႕ပင္ မဝေသးခင္မွာပဲ ကားအက္စီးဒန့္ျဖစ္သြားခဲ႕တယ္ ခင္ပြန္းသည္က ေဆးရုံေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပဲ သူ႕ဇနီးကိုေဒါက္တာနာရီေဂ်းကို ...
Queen For Seven Days (2017) Complete ဒီစီးရီးဟာ KBS ႐ုပ္သံကေန ေမလ ၃၁ရက္ေန႔က စတင္ျပသေနတဲ့ ကိုရီးယားနန္းတြင္း အခ်စ္ဇာတ္လမ္း စီးရီးပဲျဖစ္ပါတယ္ ... ဗုဒၶဟူးနဲ႔ ေသာၾကာေန႔ေတြမွာ ထုတ္လႊင့္တာ ျဖစ္ၿပီး ဒီစီးရီးမွာ အပိုင္း ၂၀ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ...ဇာတ္လမ္းအစမွ ေျပာထားသလိုပဲ သမိုင္းကို အေျခခံထားေပမယ့္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ ႐ိုက္ကူးပုံေဖာ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ... သမိုင္း ေက်ာ႐ိုးအေနနဲ႔ကေတာ့ မင္းသား Jin Saung ဟာ Shin Chae-Kyung နဲ႔ ၁၄၉၉ ခုႏွစ္မွာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ၁၅၀၆ မွာ မင္းသား Jin Saung က ဘုရင္ျဖစ္လာၿပီး Shin Chae-Kyung ကေတာ့ မိဘုရားျဖစ္လာပါတယ္ ... ဒါေပမယ့္ ခုနစ္ရက္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ မိဘုရားအရာက်သြားၿပီး နန္းတြင္းျပင္ပကို ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရပါတယ္ ... ဒါကေတာ့ ဂ်ိဳဆန္ေခတ္မွာ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းေက်ာ႐ိုးပါ ... ဒါကို ...